Aqriso Magacyada: Farmaajo oo dallacsiiyey 174 sarkaal balse ka reebay ciidankii… - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
Aqriso Magacyada: Farmaajo oo dallacsiiyey 174 sarkaal balse ka reebay ciidankii…
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa weli wada ka aargudashada saraakiishii hoggaamineysay ciidankii ka horyimid damaciisii muddo kororsiga, kuwaas oo gudaha u soo galay caasimadda.
Caasimada Online ayaa ogaatay in madaxweyne Farmaajo uu dhawaan soo saaray dikreeto uu ku dalacsiiyey 174-sarkaal oo ka tirsan militeriga Soomaaliya, kuwaas oo sida la sheegay ah intii ku qanacsaneed in Farmaajo mudada kororsado.
Hase yeeshee waxaa liiskaan laga dhowray oo aan la dalacsiin dhammaan saraakiishii ciidanka xoogga dalka ee ka soo muuqatay halgankii loogu magac daray ‘Badbaado Qaran’ kaas oo looga hor tegay mudo kororsi laba sano ahaa oo qaar ka mid ah xildhibaanadii waqtigu ka dhamaaday ay 12-kii bishii Abriil u sameeyeen Madaxweyne Farmaajo.
Dalacsiintani waxay u muuqataa in Farmaajo uu uga aar gudanayo saraakiishii awooda ciidan uga hor timid mudo kororsigiisa.
Caasimada Online ayaa heshay warqad shan bog ah oo ka soo baxday xafiiska Farmaajo, taas oo ay ku qoran yihiin magacyada 174 sarkaal oo la dalacsiiyey, waxaana dikreetadaan lagu faray Taliyaha Xoogga Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage in dalacsiintaan lagu abaalmariyey saraakiisha liiskaan ku xusan uu dhaqan geliyo.
Tallaabadaan waxay burisay heshiiskii ay horay u gaareen saraakiishii iyo siyaasiyiintii Badbaado Qaran iyo Ra’iisul Wasaare Rooble, kaas oo dhigayey in ciidanka aan loo kala eexan oo aan laga aar gudan ciidanka iyo saraakiisha Badbaado Qaran ee ka hor yimid damacii Farmaajo ee mudo kororsiga.
Ciidanka ay hoggaamiyaan saraakiisha laga reebay dalacsiintaan waa kuwa Al-Shabaab kula dagaalama gobollada ku hareereysan caasimadda Muqdisho ee Shabeellooyinka.
Hoos ka eeg liiska 174-ka sarkaal ee Farmaajo dalacsiiyey
The post Aqriso Magacyada: Farmaajo oo dallacsiiyey 174 sarkaal balse ka reebay ciidankii… appeared first on Caasimada Online.